Accueil Boky sy Trakta
Mety ho sitrana ianao
Ny Baiboly no fitambaran’ny tenifikasana sy ny didy… Mampiseho ny fomba hiaraha-mandeha amin’Andriamanitra ny didy, ary manambara amintsika ny fitahiana izay atolotr’Andriamanitra kosa ny tenifikasana.
Ny hahavoavonjy anao aloha no zavatra mahaliana anay voalohany indrindra, ary rehefa izany dia tonga « zanaky ny tenifikasana ianao », zanak’Andriamanitra. Hoy ny Baiboly : Ny tenifikasan’Andriamanitra dia Eny sy Amena ho an’izay rehetra ao amin’i Kristy Jesosy. Na iza na iza tonga ao amin’i Kristy Jesosy dia zanak’Andriamanitra, ary ny tenifikasan’Andriamanitra rehetra dia Eny sy Amena ho an’izay rehetra ao amin’i Kristy Jesosy toy izao tenifikasana izao : « Izay mamela ny helokao rehetra ary manasitrana ny aretinao rehetra… » ary : « Izaho no Jehovah Andriamanitrao izay mahasitrana anao… », « Ny dian-kapoka taminy no nahasitranana antsika … » Teny fampanantenana ireo. Mamela heloka Izy sady manasitrana koa… ka hoy Andriamanitra : « Eny sy Amena ho an’ny fanasitranana anao…raha mino sy manaiky izany ianao ! »
Raha fantatra fa ho avy anio alina Jesosy
« Koa miomana kosa ianareo fa amin’ny ora tsy hampoizinareo no hiavian’ny Zanak’olona. »
Matio. 24 : 44
RAHA FANTATRA FA HO AVY ANIO ALINA JESOSY !
Poa toy izay dia ho feno olona mivavaka ny fiangonana ;
Ho foana ny trano fijerena sary mihetsika (sinema), ny toeram-pisotroana zava-mahamamo, ny toeram-pandihizana sy ny toeram-pilalaovana ary ny toeran-kafa tsy araka an’Andriamanitra ;
Tsy hisy intsony ny lalao baolina, ny sary mihetsika, na ny raharaha hafa an’izao tontolo izao ;
Hijanona ny fanozonana, ny fitenenan-dratsy, ny fianianana ary ny fiteny tsy mahomby rehetra;
Tsy hisy intsony ny fihinanan-kanina ao am-piangonana ;
Hanasa ny tavany ny vehivavy izay nandoko ny endriny ary hanao fitafiana mahamendrika ;
Hanakatona ny efitrano madio fandraisam-bahiny ny olona ka hivavaka miafina ao ;
Ary samy tsy hisy te hiseho ho mpanao hatsikana raha mifanatrika amin’i Jesosy ;
Samy hanary ny sigarany ny lehilahy, na ny vehivavy ka tsy te hifoka izany intsony.
Ho doran’ny ray aman-dreny ny literatiora maloto rehetra ka hoesoriny ao an-tranony ny karatra sy ny zava-maloton’ny devoly ;